Zimbabwe Opposition Turns To US Diaspora For Financial Support
The Movement for Democratic Change faction led by Morgan Tsvangirai has issued an appeal to Zimbabweans in the diaspora to provide financial assistance aimed at bolstering awareness of democratic principles in the country's rural areas.
MDC Manicaland official Webber Chinyadza recently visited the United States where he held meetings with MDC members and unaffiliated Zimbabweans in various states.
Chinyadza said the MDC faction is targeting rural communities which for the most part are disadvantaged in terms of their access to information. Rural areas represent one of the ruling ZANU-PF party's most critical bases of support across the country.
He told reporter Carole Gombakomba of VOA's Studio 7 for Zimbabwe that the MDC's rural projects are faltering due to a lack of teaching materials and fuel, and that the Zimbabwean diaspora by supporting such projects can play a critical role.